Semalt: Ntak ihe ọdịnaya na isiokwu dị mkpa na imewe weebụ?
A weebụsaịtị nke na-enweghị ihe ziri ezi ọdịnaya, na-adịghị haziri nke ọma, ga-enweta enweghị okporo ụzọ, nke pụtara na ọ gaghị enyere nzukọ na-eme ka mmetụta online.Ọ ga-agafekwa site na engines ọchụchọ n'ihi na enweghị ọdịnaya dị mkpa. Keywords na ọdịnaya na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ogo nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ivan Konovalov site na Semalt a tụlere n'okpuru ihe ndị a, otu nzukọ kwesịrị ịma nke ọma na ọdịnaya
1. Ịkọwapụta ndị ahịa gị
Ọ bụ ọrụ nke azụmahịa niile ịkụziri ndị ahịa ya na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa naanị na ndị na-ere ahịa ma na-atụ anya na ha ga-agbaso na ịzụta. Ọbụna n'oge ochie mgbe ihe ọmụma siri ike ịbịa, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ịkụziri ndị mmadụ ụzọ tupu ha ere ngwaahịa ahụ.
Ọ bụ n'ihi nke a ka i kwesịrị inwe ihe ziri ezi banyere ngwaahịa gị maka ndị na-azụ ahịa. Ọzọkwa, ndị na-azụ ahịa ga-achọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ na ahịa ahụ dum ka ha wee nwee ike ịme mkpebi ha. Ihe ntanetị weebụ nke na-echebara ihe a nile n'uche ga-ejide n'aka ọha mmadụ.
2. Ị ga - abụ isi ihe dị ka ozi
Ndị mmadụ n'ozuzu ha kwadoro weebụsaịtị ma ọ bụ ọbụna onye maka okwu ahụ nke na-egosi na ha nwere ike ịtụkwasị obi ịmara ihe ha na-ekwu. Ọ bụrụ na ndị na-ahụ maka ịntanetị hụrụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị ka ihe ọmụma, ọtụtụ mmadụ ga-anọgide na-abịa. Kedu ihe ọzọ, ndị mmadụ ga-enwe echiche n'ozuzu na naanị ebe ha nwere ike inweta ezigbo ngwaahịa ngwaahịa bụ saịtị gị. Site n'inwe ihe omuma a n'ime usoro ntinye weebụ, ị na-eguzo nnukwu ohere ịmalite ahịa na n'akụkụ gị.
3. Igwe ogo search engine ka mma
E kere weebụsaịtị ọ bụla na ọhụụ ma ọ bụ echiche nke na-ebute ya n'elu peeji nke ọchụchọ. Site n'inwe afọ ojuju na itinye mkpụrụ okwu na ebe kwesịrị ekwesị, ebe nrụọrụ weebụ gị na-anọchi anya ohere nke ọtụtụ ndị. Isi ihe mere nke a bụ n'ihi na engines ọchụchọ ga-edepụta ya nke ukwuu na ibe ọchụchọ.
4. Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enweta ihe backlinks
Ị maara ụlọ njikọ, ma ọ ga-adị mkpa ka ị mara ma ọ dị oke egwu na ebe nrụọrụ weebụ gị dị. Ebe nrụọrụ weebụ ndị nwere ozi dị elu ma dị mma, tinyekwara mkpokọta ndị ọzọ, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ ga-achọ ka a laghachi azụ na ha. N'ụzọ dị otú a, ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ na-enwetawanye ọnyà karịa nke na-enweghị ọdịnaya dị elu Source .